AMBATONDRAZAKA : Nihaona tamin’ny vahoakan’ Antsahalava sy Ambalabako i Roger Ratianarivo
Ny fokontany Ambalabako no fokontany fahafolo mandrafitra ny kaominina Ambatondrazaka renivohitra amin’izao fotoana izao. 8 octobre 2019
Tsy nataon’ny kandidàn’ny IRK Ratianarivo Roger ho faralahy anefa izy na dia fokontany nitsangana farany indrindra tato anatin’ity renivohi-paritra ity aza, fa nidina teny ifotony mihitsy nitafa nivantana tamin’ireo vahoaka monina ao an-toerana izy, izay nijereny manokana ny olana sedrain’izy ireo amin’izao fotoana izao. Niaraka taminy tamin’izany ihany koa ireo mpanolotsaina mandrafitra ny lisitra IRK ho an’ny renivohitra Ambatondrazaka izay misalotra ny laharana faha-02 amin’ny biletà tokana raha toa ka ny laharana faha-04 ny an’ny Ben’ny tanàna.
Nambaran’ireo mponina tamin’izany fa isan’ny mampijaly azy ireo ny resaka jiro sy ny toeram-panasana lamba ary ny tatatra fanarian-drano maloto izay tsentsina avokoa ny bizo. Ankoatra izay ny olana amin’ny tsy fisian’ny tsena ka mahavoatery azy ireo hivarotra amin’ny ladina an-tany na maina andro na avy orana. Tsy maintsy hijerena vahaolana haingana ny resaka fahazavana, hoy ity kandidà natolotry ny vovonana miaraka amin’i Andry Nirina Rajoelina ao Ambatondrazaka ity, ary hovahana ihany koa ny resaka tatatra satria efa hiditra ny anim-potoanan’ny rotsak’orana. Mahakasika ny tsena dia nambarany fa na dia mbola tsy ao anatin’ny fampielezan-kevitra izao dia efa isan’ny voadinika niaraka tamin’ny mpanolotsaina sy ny ekipa mandrafitra ny fampielezan-keviny ny mahakasika azy io. Nitovy tamin’izay ihany koa ny olana tao Antsahalava izay niompana tamin’ny resaka tsy fahampian’ny jiro manazava tanàna no olana ary dia efa nandroso vahaolana sahady andriamatoa Roger Ratianarivo.
Nahafa-po ny mponina tamin’ireo toerana notsidihiny ireo izao fahatongavany izao na dia somary tampoka ihany aza satria nambaran’ireo mponina fa tsy vao izao no nahafantaran’ izy ieo an’I Roger Ratianarivo fa efa hatramin’ny ela noho izy olona mpanao asa sosialy ary niaraka niaina tamin’ny vahoaka hatrany hatramin’izay na dia mbola tsy kandidà aza tamin’izany. Mahavelom-panantenana anay ny fahitana anareo rehetra izay hita ho tanora tokoa kanefa sahy mandray andraikitra, hoy ireo mponina tany Ambalabako sy tao Antsahalava, ka mitso-drano anareo izahay hahaleo hahalasana amin’ny adidy izay horaisinareo amin’ny fampandrosoana an’Ambatondrazaka.
Hariliva R/ TH